3 May 2017 . 5:09 PM
လူတော်တော်များများ ပြောကြတာက ကျွန်တော်တို့က ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ အသုံးပြုတယ်တဲ့။ ဒါဆိုကျန်တဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ဘာမှမသုံးတဲ့အတွက် အလဟဿ ဖြစ်နေမှာပါလား။ ဦးနှောက်ရဲ့ ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေ အသုံးပြုနိုင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမယ်ဆိုတဲ့ Neuroscience အခြေခံ သင်တန်းတွေရှိပေမယ့် ဒါတွေအကုန်လုံးက ဈေးများပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်နဲ့ သိပ္ပံဘာသာသင်ကြားတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမ ထက်ဝက်လောက်ဟာ ဒီ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်နားလည်မှု လွဲနေကြပါတယ်။ ၁၈၉၀ တုန်းက အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်ကြီး ဝီလီယမ် ဂျိမ်း (William James) ဟာ “ကျွန်တော်တို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ စိတ်စွမ်းအင်ကို အပြည့်အဝ အသုံးမချနိုင်ပါဘူး” လို့ပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ ဦးနှောက်ရဲ့အသုံးပြုမှုကို ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ အယူအဆက အဲ့ဒီက စပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကလည်း အချိ်န်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ဦးနှောက်ရဲ့အရှေ့ဘက်အခြမ်း Frontal Lobes နဲ့ ကြီးများကျယ်ပြန့်တဲ့ Parietal Lobe တွေအကြောင်းကို အဖြေမရှာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခုခုထိခိုက်မိရင်တောင်မှ ဦးနှောက်ရဲ့ Motor နဲ့ Sensory အစိတ်အပိုင်းတွေက ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့မှာ ထွေထွေထူးထူးလုပ်ဆောင်ချက်မရှိဘူးလို့ ဟိုတုန်းက မှတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ အဲ့ဒီအစိတ်အပိုင်းတွေအကြောင်း အသံတိတ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက် တွေရောပေါ့။ တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက အရမ်းအရေးပါပါတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့တွေသာ မရှိရင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလို့ပြောဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ သူတို့က ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်ခြင်း၊ စနစ်တကျ အကွက်ချခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လိုက်လျောညီထွေလုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးခေါင်းခွံထဲမှာရှိတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က လုံးလုံးအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်အနေနဲ့ စွမ်းအင်ဘယ်လောက်ကို သုံးစွဲသလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်ကြည့်တဲအခါမှာတော့တော်တော်လွဲမှားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကြွက်နဲ့ ခွေးတို့ဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်အတွက် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့စွမ်းအင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ အသုံးချပါတယ်။ မျောက်ကတော့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူသားတစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိတဲ့ ဦးနှောက်အတွက် နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ Glucose ဓါတ်တွေထဲက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ ကလေးသူငယ်တွေဆိုရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သုံးပြီးမွေးကင်းစအရွယ်ဆိုရင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိအသုံးပြုပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အ ရွယ်အစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်အရွယ်အစားသေးငယ်ပေမယ့် စွမ်းအင်ကတော့ အများကြီး အသုံးပြုပါတယ်။ လူသားရဲ့ဦးနှောက်ဟာ ပျှမ်းပျှ ၁.၅ ကီလိုဂရမ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဆင်ကတော့ ၅ ကီလိုဂရမ်ပါ။ ဝေလငါးတွေ ကတော့ ၉ ကီလိုဂရမ်လေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားတွေရဲ့ ဦးနှောက်က အခြားသတ္တဝါတွေထက် Neurons ပါဝင်မှုအရေအတွက် အများကြီးပိုများပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပိုများတာကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အားသာစေတဲ့အချက်ပါ။ လူ၊ လူဝံ၊ မျောက်ဝံ စတဲ့ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်အစားနဲ့ Neuron အရေအတွက်ကြား ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ အလေးချိန် ၂၅ ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ မျောက်ဝံတစ်ကောင်ဟာ သူ့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲက Neuron အရေအတွက် ၅၃ ဘီလီယံကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ တစ်နေ့ကို ၈ နာရီလောက် အစာစား ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းတစ်သန်းခွဲလောက်က တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ချက်ပြုတ်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို များစွာအသာ ရစေပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေက ပိုမိုနူးညံ့သွားပြီး အစာတစ်ဆင့်ခြေပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အူတွေက အစာကနေစွမ်းအင်တွေကို စုပ်ယူတဲ့အခါမှာ အရမ်းကိုလွယ်ကူသွားပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ပြီးစားသောက်တာက အစိမ်းစားတာထက် စွမ်းအင်တွေပိုမိုရှိနိုင်ပြီး ၈၆ ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ Neuron အရေအတွက်ကို ဦးနှောက်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမျောက်ဝံတွေထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပါတယ်။
ကယ်လိုရီဝက်လောက်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်တိုင်း ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ဆိုဒီယမ် Ion တွေက ဦးနှောက်ရဲ့အမြှေးပါးတွေကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းရာကနေ လျှပ်စစ်ဓါတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဦးနှောက်က စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းအင်တွေ ရယူပါတယ်။ သူ့ရဲ့စားသုံးမှုက တစ်မိနစ်ကို ၃၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ATP Molecules ရှိပါတယ်။ (ATP = Adenosine Triphosphate) ။ ကိုယ်ခန္ဓာက မီးဖိုကြီးဆိုရင် ATP ဆိုတာက မီးသွေးလိုမျိုးလောင်စာပါ။ ၈၆ ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့ Neuron တွေအတွက်ဆိုတော့ စွမ်းအင်တွေအများကြီး ကုန်ကျပါလိမ့်မယ်။ တကယ့် သဘောတရားကအခုမှ လာမှာပါ။ တကယ်တော့ ဦးနှောက်က သူစားသုံးရမယ့်စွမ်းအင်ကိုချွေတာနိုင်ဖို့အတွက် Sparse Coding ဆိုတဲ့စနစ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Sparse Coding ဆိုတာက စွမ်းအင်နည်းနည်းနဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးကို ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စနစ်ပါ။ ဦးနှောက်မှာ သတင်းအချက်အလက်တွေသွားဖို့ လမ်းကြောင်းတွေက ထောင်သောင်းမက ရှိပြီးတော့ ဘယ်လမ်းကြောင်းက သွားရမလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့ ဦးနှောက်တစ်ခုလုံး သတင်းအချက်အလက်တွေလွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ အသုံးပြုတဲ့ ဆဲလ်ရာခိုင်နှုန်းက ၁ ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ လိုအပ်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ အသုံးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ မသိစိတ် (Unconscious Mind) လို့ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာက ဦးနှောက်တစ်ခုလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့လုံလောက်သလို ဦးနှောက်ရဲ့ မွေးရာပါ စွမ်းအင်ချွေတာတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသုခ (အခရာ) (www.akhayar.com) Ref: What Percentage of brain do you use? Richard E. Soldes Nike Pas Cher Cytowic (Unicode)
လူတျောတျောမြားမြား ပွောကွတာက ကြှနျတျောတို့က ဦးနှောကျရဲ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးကိုပဲ အသုံးပွုတယျတဲ့။ ဒါဆိုကနျြတဲ့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးက ဘာမှမသုံးတဲ့အတှကျ အလဟဿ ဖွဈနမှောပါလား။ ဦးနှောကျရဲ့ ကနျြတဲ့ရာခိုငျနှုနျးတှေ အသုံးပွုနိုငျအောငျ လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးမယျဆိုတဲ့ Neuroscience အခွခေံ သငျတနျးတှရှေိပမေယျ့ ဒါတှအေကုနျလုံးက ဈေးမြားပါတယျ။ လူဦးရရေဲ့ သုံးပုံနှဈပုံလောကျနဲ့ သိပ်ပံဘာသာသငျကွားတဲ့ဆရာ၊ ဆရာမ ထကျဝကျလောကျဟာ ဒီ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးအပျေါနားလညျမှု လှဲနကွေပါတယျ။ ၁၈၉၀ တုနျးက အမရေိကနျစိတျပညာရှငျကွီး ဝီလီယမျ ဂြိမျး (William James) ဟာ “ကြှနျတျောတို့ဟာ ခန်ဓာကိုယျတှငျးမှာရှိတဲ့ စိတျစှမျးအငျကို အပွညျ့အဝ အသုံးမခနြိုငျပါဘူး” လို့ပွောကွားခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါဟာ ဦးနှောကျရဲ့အသုံးပွုမှုကို ရညျညှနျးပွီးပွောဆိုခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့၁၀ ရာခိုငျနှုနျးဆိုတဲ့ အယူအဆက အဲ့ဒီက စပါတယျ။ သိပ်ပံပညာရှငျတျောတျောမြားမြားကလညျး အခြိနျတျောတျောကွာတဲ့အထိ ဦးနှောကျရဲ့အရှဘေ့ကျအခွမျး Frontal Lobes နဲ့ ကွီးမြားကယျြပွနျ့တဲ့ Parietal Lobe တှအေကွောငျးကို အဖွမေရှာနိုငျခဲ့ပါဘူး။ တဈခုခုထိခိုကျမိရငျတောငျမှ ဦးနှောကျရဲ့ Motor နဲ့ Sensory အစိတျအပိုငျးတှကေ ဘာမှမဖွဈသှားပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့မှာ ထှထှေထေူးထူးလုပျဆောငျခကျြမရှိဘူးလို့ ဟိုတုနျးက မှတျယူခဲ့ကွပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတျောတျောကွာတဲ့အထိ အဲ့ဒီအစိတျအပိုငျးတှအေကွောငျး အသံတိတျနခေဲ့ကွပါတယျ။ သူတို့ရဲ့လုပျဆောငျခကျြ တှရေောပေါ့။ တကယျတော့ သူတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျနဲ့ ပေါငျးစပျလုပျဆောငျနိုငျစှမျးက အရမျးအရေးပါပါတယျ။ တကယျလို့ သူတို့တှသော မရှိရငျ ကြှနျတျောတို့ကိုယျ ကြှနျတျောတို့လူသားတှလေို့ပွောဖို့ တျောတျောခကျပါတယျ။ သူတို့က ကြိုးကွောငျးဆငျခွငျနိုငျခွငျး၊ စနဈတကြ အကှကျခခြွငျး၊ ဆုံးဖွတျခကျြခခြွငျး၊ လိုကျလြောညီထှလေုပျဆောငျတတျခွငျး စတာတှကေို လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးခေါငျးခှံထဲမှာရှိတဲ့ ဦးနှောကျရဲ့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျက လုံးလုံးအသုံးမဝငျဘူးဆိုတာက ကြှနျတျောတို့ ဦးနှောကျအနနေဲ့ စှမျးအငျဘယျလောကျကို သုံးစှဲသလဲဆိုတာကိုတှကျခကျြကွညျ့တဲအခါမှာတော့တျောတျောလှဲမှားနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ကွှကျနဲ့ ခှေးတို့ဟာဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ ဦးနှောကျအတှကျ ကိုယျခန်ဓာရဲ့စှမျးအငျ ၅ ရာခိုငျနှုနျးကိုပဲ အသုံးခပြါတယျ။ မြောကျကတော့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးပါ။ ဒါပမေယျ့ အရှယျရောကျပွီးသားလူသားတဈယောကျကတော့ ကိုယျခန်ဓာအလေးခြိနျရဲ့ ၂ ရာခိုငျနှုနျးလောကျသာရှိတဲ့ ဦးနှောကျအတှကျ နစေ့ဉျစားသောကျနတေဲ့ Glucose ဓါတျတှထေဲက ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျကို အသုံးပွုပါတယျ။ ကလေးသူငယျတှဆေိုရငျ ၅၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ သုံးပွီးမှေးကငျးစအရှယျဆိုရငျ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိအသုံးပွုပါတယျ။ လူသားတှရေဲ့ ဦးနှောကျဟာ ခန်ဓာကိုယျအ ရှယျအစားနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျအရှယျအစားသေးငယျပမေယျ့ စှမျးအငျကတော့ အမြားကွီး အသုံးပွုပါတယျ။ လူသားရဲ့ဦးနှောကျဟာ ပြှမျးပြှ ၁.၅ ကီလိုဂရမျပဲ ရှိပါတယျ။ ဆငျကတော့ ၅ ကီလိုဂရမျပါ။ ဝလေငါးတှေ ကတော့ ၉ ကီလိုဂရမျလေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူသားတှရေဲ့ ဦးနှောကျက အခွားသတ်တဝါတှထေကျ Neurons ပါဝငျမှုအရအေတှကျ အမြားကွီးပိုမြားပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးပိုမြားတာကပဲ ကြှနျတျောတို့ကို အားသာစတေဲ့အခကျြပါ။ လူ၊ လူဝံ၊ မြောကျဝံ စတဲ့ နို့တိုကျသတ်တဝါတှမှော ကိုယျခန်ဓာအရှယျအစားနဲ့ Neuron အရအေတှကျကွား ဆကျစပျမှုရှိပါတယျ။ အလေးခြိနျ ၂၅ ကီလိုဂရမျလေးတဲ့ မြောကျဝံတဈကောငျဟာ သူ့ရဲ့ဦးနှောကျထဲက Neuron အရအေတှကျ ၅၃ ဘီလီယံကို ထိနျးသိမျးထားနိုငျဖို့ တဈနကေို့ ၈ နာရီလောကျ အစာစား ဖို့လိုအပျပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျးတဈသနျးခှဲလောကျက တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ခကျြပွုတျခွငျးက ကြှနျတျောတို့ကို မြားစှာအသာ ရစပေါတယျ။ ခကျြပွုတျထားတဲ့ အစားအစာတှကေ ပိုမိုနူးညံ့သှားပွီး အစာတဈဆငျ့ခွပွေီးသားဖွဈသှားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့အူတှကေ အစာကနစှေမျးအငျတှကေို စုပျယူတဲ့အခါမှာ အရမျးကိုလှယျကူသှားပါတယျ။ ခကျြပွုတျပွီးစားသောကျတာက အစိမျးစားတာထကျ စှမျးအငျတှပေိုမိုရှိနိုငျပွီး ၈၆ ဘီလီယံလောကျရှိတဲ့ Neuron အရအေတှကျကို ဦးနှောကျထဲမှာ ထိနျးသိမျးထားနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာမြောကျဝံတှထေကျ ၄၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျပိုပါတယျ။
ကယျလိုရီဝကျလောကျလောငျကြှမျးမှုဖွဈတိုငျး ပိုတကျဆီယမျနဲ့ ဆိုဒီယမျ Ion တှကေ ဦးနှောကျရဲ့အမွှေးပါးတှကေို ဖွတျသနျးစီးဆငျးရာကနေ လြှပျစဈဓါတျတှဖွေဈပျေါပါတယျ။ ဒီလိုနညျးနဲ့ ဦးနှောကျက စဉျဆကျမပွတျစှမျးအငျတှေ ရယူပါတယျ။ သူ့ရဲ့စားသုံးမှုက တဈမိနဈကို ၃၄,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ATP Molecules ရှိပါတယျ။ (ATP = Adenosine Triphosphate) ။ ကိုယျခန်ဓာက မီးဖိုကွီးဆိုရငျ ATP ဆိုတာက မီးသှေးလိုမြိုးလောငျစာပါ။ ၈၆ ဘီလီယံလောကျရှိတဲ့ Neuron တှအေတှကျဆိုတော့ စှမျးအငျတှအေမြားကွီး ကုနျကပြါလိမျ့မယျ။ တကယျ့ သဘောတရားကအခုမှ လာမှာပါ။ တကယျတော့ ဦးနှောကျက သူစားသုံးရမယျ့စှမျးအငျအတှကျ Sparse Coding ဆိုတဲ့စနဈကို အသုံးပွုပါတယျ။ Sparse Coding ဆိုတာက စှမျးအငျနညျးနညျးနဲ့ သတငျးအခကျြအလကျတှအေမြားကွီးကို ပို့ဆောငျနိုငျတဲ့စနဈပါ။ ဦးနှောကျမှာ သတငျးအခကျြအလကျတှသှေားဖို့ လမျးကွောငျးတှကေ ထောငျသောငျးမက ရှိပွီးတော့ ဘယျလမျးကွောငျးက သှားရမလဲဆိုတာကို ကိုယျတိုငျဆုံးဖွတျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးနဲ့ ဦးနှောကျတဈခုလုံး သတငျးအခကျြအလကျတှလှေမျးခွုံနိုငျဖို့ အသုံးပွုတဲ့ ဆဲလျရာခိုငျနှုနျးက ၁ ရာခိုငျနှုနျးကနေ ၁၆ ရာခိုငျနှုနျးအထိပဲ လိုအပျပါတော့တယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ ဦးနှောကျရဲ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးကိုပဲ အသုံးပွုတယျဆိုပွီးတော့ ပွောဆိုကွတာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဦးနှောကျဟာ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးပဲအလုပျလုပျတယျဆိုတာ ဟုတျပါတယျ။ ကနျြတဲ့ ၉၀ ရာခိုငျနှုနျးကတော့ မသိစိတျ (Unconscious Mind) လို့ပွောမယျဆိုလညျး ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးဆိုတာက ဦးနှောကျတဈခုလုံးကို အသုံးပွုနိုငျဖို့လုံလောကျသလို ဦးနှောကျရဲ့ မှေးရာပါ စှမျးအငျခြှတောတဲ့စနဈတဈခုဖွဈပါတယျ။ မငျးသုခ (အခရာ) (www.akhayar.com) Ref: What Percentage of brain do you use? Richard E.